TAMAANDHADA "JACAYLKAYGA" F1: SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SIFOOYINKA UGU MUHIIMSAN EE YAANYO - BEER CAGAARAN
Tamaandho kala duwan Jacaylka F1: sharaxaadda iyo sifooyinka tamaandhada sii kordhaya leh "sanka"
Labada beerood oo waaweyn iyo bannaanka u caadi ah la kulmaan su'aasha adag: nooca tamaandho ah si ay u beertaan xilliga cusub, si ay u siin doonaa goosashada dhakhso ah, iyo midhaha waxay noqon doontaa dhadhan fiican oo leh bandhig bandhig ah.
Kuwa doonaya inay si dhaqso ah u soo ururiyaan yaanyo bisil, dhadhamin dadaal yar, waxaa jira jilitaan aan la qabin. Waxaa la yiraahdaa "Jacaylkayga."
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay fududahay daryeelka iyo beerashada, nooca tamaandhirku leeyahay hal faa'iido weyn - ma aha dhalidda ugu sareeya.
Akhriso dheeraad ah ee sharaxaadda maqaalkeena kala duwan, sifooyinka iyo astaamaha beerashada, iska caabinta cudurada.
Magaca dugsiga Jacaylkayga
Bisaylka 90-105 maalmood
Foomka Wareegay, wax yar ka yar, oo leh faashad kala duwan
Cunto dhexdhexaad ah 120-200 garaam
Noocyo dhaadheer 4 kg oo baadiyaha ah
Noocyada sii kordhaya Si fudud u dulqaadan la'aanta qoyaanka iyo heerkulka heerkulka.
Cadaadiska cudurada Iska daaweyn cudurada waaweyn ee yaanyada
Waa gabi ahaanba, geedka caadiga ah. Ku saabsan fasalada aan caddayn ee halkan ka akhriso. Warshadu waa mid dhexdhexaad ah 50-80 cm, markii ay ku koraan gobollada koonfureed iyo aqalka dhirta lagu koriyo waxay ku xirnaan kartaa 120 cm. Marka la eego Bisaylkiisa, waxay ka mid tahay noocyada hore, laga bilaabo geedo beerto si ay u dillaacaan miraha ugu horreeya, waxaa lagama maarmaan ah inay sugto 90-105 maalmood. "Jacaylkayga" waa yaanyo loo habeeyey si kor loogu qaado dhulka iyo goobaha lagu koriyo, dhirbaaxada iyo filimka hoostiisa.
Warshadu waxay leedahay tiro celcelis ah caleemo iyo iska caabin wanaagsan si ay u dillaacaan midhaha, si ay u badiyaan cudurada habeenkii, si ay u weeraraan cayayaanka. Mana aha wax la yaab leh dad badan oo isaga u qadariya difaac adag. Wixii kale oo noocyo kale oo sare-u-adkaysi leh iyo cudur-u adkaysta, akhriya maqaalkan.
Miraha soo gaarsiiyay bisilada varietal waxay leeyihiin midabka guduudan ama midab casaan ah, qaabkoodu waxay ku wareegsan yihiin, wax yar ka yar, oo leh dabeecad "spout". Saxarka ayaa ah mid isku mid ah, sonkor, dhadhanka waa wax fiican, waxoogaa macaan.
Cabbirka celceliska, isku dhafan, miisaankiisu yahay 120-200 g, taas oo si weyn u kordhisa qiimaha wax soo saarka iyo soo jiidashada. Tirada qolalka waa 3-4, maadada qallalan waxay ku dhowdahay 5%. Harvest waxaa lagu keydin karaa meel qabow ah wakhti dheer waxaana loo dulqaadan karaa gaadiidka.
Hoos waxaad ka arki kartaa macluumaad ku saabsan miisaanka midhaha noocyo kale oo yaanyo ah:
Spam Pink 160-300
Sannad dahab ah 150-200
Verlioka iyo f1 100-130
Dalka dalagyada iyo koritaanka gobollada
Kala duwan yaanyo "I Love" f1, waxaa helay khubaro Ruush ah. Diiwangalinta Gobolka oo ah noocyo kala duwan oo lagula taliyay goobaha furan iyo kuwa aqalka dhirta lagu koriyo, oo la helay sanadkii 2008. Tan iyo markaas, waxay noqotay mid caan ku ah beeraleyda sababtoo ah tayada ganacsi ee sareysa.
Si korodh leh heer sare ah, yaanyadaas waxaa ugu wanaagsan gobollada koonfureed, Astrakhan, Kuban, Crimea iyo Caucasus ayaa si fiican ugu habboon. Meelaha lagu koriyo filimka wuxuu si wanaagsan u khudreynayaa meelo ka mid ah suunka dhexda, Urarrada iyo Bariga Fog. Meelo badan oo waqooyiga ah, goosashada caadiga ah waxaa lagu heli karaa oo keliya meelaha lagu koriyo.
Akhri sidoo kale boggayaga internetka: Sidaad u heli laheyd dhalidda sare ee yaanyada furan iyo beeraha sanadka oo dhan? Sidee loo daryeelaa noocyo Bisaylkiisa hore?
Sida loo diyaariyo ciidda beeritaanka guga ee aqalka dhirta lagu koriyo iyo nooca carrada ku haboon yaanyada.
Miraha waa yar yar oo aad u qurux badan, waxay u muuqdaan kuwo weyn oo ku jira foomka qasacadaysan. Dhimashadooda waa la qadarin doonaa haddii ay la wadaagaan cusub. Juices iyo caleemaha yaanyo ka mid ah "My Love" ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale faa'iido, thanks to content sare ee fiitamiin iyo sonkorta.
Xataa iyada oo taxaddar taxaddar leh laga bilaabo hal baadiyaha, waxaad heli kartaa ilaa 4 kg oo khudrad ah. Iyadoo cufnaanta beerashada lagu taliyey ee 3 duurka halkii mitir labajibbaaran. m waxay soo baxaysaa 12 kg. Natiijadu waa dhexdhexaad, gaar ahaan warshad dhexdhexaad ah.
Waxaad isbarbar dhigi kartaa dhalashada My Love oo leh noocyo kale oo miiska hoos ku qoran:
Jacaylkayga ilaa 4 kg duurka
Foornada cas 27 kg oo baadiyaha ah
Verlioka 5 kg baadiyaha
Qaraxa 3 kg mitir labajibbaaran
Golden Flaming 8-9 kg halkii mitir labajibbaaran
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan ee "Jacaylka" waxay muujineysaa bisaylkeeda hore. Iyo sidoo kale fiiro gaar ah u dulqaadashada wanaagsan ee heerkulka heerkulka, iyo sidoo kale dulqaad leh la'aanta qoyaanka.
Waxaa ka mid ah tayada wanaagsan ee ugu fiican ee noocan ah ee tamaandhada:
uma baahnid in la nadiifiyo;
ugxanta saaxiibtinimo iyo bislaanshaha;
isticmaalka kala duwan;
tayada dhadhanka sare;
xasaasiyad aan la qabin oo xooggan.
Waxaa ka mid ah daraasooyinka la qoray:
stem of weak;
awood-siinta bacriminta marxaladda koritaanka.
Noocani noocan ah wuxuu leeyahay dhumuc xoog leh oo jirkeedana uma baahnid garaf, oo laamuhu waxay ku jiraan qoryo. Ma aha lagama maarmaan in la xoqo berrinka bannaan, laakiin halkan waa in la xasuusto in tani ay yareyn doonto muddada bislaado. Inta lagu jiro kobaca firfircooni wuxuu si fiican uga jawaab celinayaa waxyaabo ay ka mid yihiin potassium iyo fosfooraska, mustaqbalka waxaad ku sameyn kartaa Bacriminta adag. Ha ilaawin ka dib markaad ku beerto meel joogto ah oo ku saabsan waraabinta joogtada ah iyo mulching ee ciidda.
Akhri sidoo kale maqaalo waxtar leh oo ku saabsan quudinta yaanyada:
Sida loo isticmaalo bacriminta bacrimin, iodine, ash, hydrogen peroxide, ammonia, boric acid?
Sida loo quudiyo geedo, yaanyada marka la soo qaado iyo waxa nafaqada foliar ah?
Bacriminta dabiiciga ah iyo macdanta, TOP of dhismayaasha ugu wanaagsan.
Akhri sidoo kale boggayaga internetka: Sida loo beerayo yaanyada geedo iyo nooca carrada loo baahan yahay tan?
Waa maxay ciidda ay ku koraan geedo yaanyo ah? Sidee loo codsadaa kor u qaadayaasha kobcinta iyo fungicides?
"Jacaylkaygu" wuxuu leeyahay iska caabin aad u wanaagsan oo cudurro badan, sidaas darteed haddii aad raacdo dhammaan tallaabooyinka daryeelka iyo ka hortagga, cudurku waa la dhaafi doonaa.
Khatarta ugu weyn waa Alternaria, Fusarium, Verticillis, Dareemo danbe. Waxaad wax dheeraad ah ka baran kartaa cudurradan ku jira maqaallada boggayaga. Iyo sidoo kale ka akhriso badbaadinta ka dhanka ah phytophthora iyo ku saabsan noocyo aan ku xanuunsan.
Cayayaanka waa la weerari karaa cayayaanka - baradho baradho ah, barxan, dhiiqo iyo caarada caarada. Insecticides waxay ku caawin doontaa inay ka takhalusaan.
Tamaandhada "Jacaylkayga" waxay ku haboon tahay beeralayda jilicsan iyada oo aan khibrad yar lahayn, maadaama aysan jirin wax ku adag daryeelka, marka laga reebo xeerarka fudud. Nasiib wacan iyo mid wanaagsan.
Waxaan sidoo kale soo jeedinaynaa in aad naftaada u baratid noocyo kale oo yaanyo oo leh shuruudo kala duwan:
Dhiirigelinta Dambiga Bannaanka huruudka ah Pink Bush F1
King bell Titan Flamingo
Katya Flaashka F1 Furan
Valentine Salaan sharaf leh Chio Chio San
Mucjisyada sonkorta Mucjisada suuqa Supermodel
Verlioka De barao madow F1 waaweyn